1-4mL Autosampler vials N'ihi HPLC, UPLC, GC
16mm, 25mm Test tube N'ihi Water Analysis okporoko, FTU
8-60mL EPA Nchekwa vials
HPLC ntụtụ Myọcha
iru eru Certificate
e hiwere na 2007
Zhejiang Aijiren Technology, Inc bụ a zuru ụwa ọnụ soplaya nke ndụ-sayensị, onwu, laabu consumables, wdg Anyị isi na ngwaahịa ndị elu arụmọrụ mmiri mmiri chromatography & gas chromatography consumables dị ka Chromatography Autosampler vials na closures, inserts, crimper na ntụtụ nzacha, wdg; Water analysis consumables dị ka okporoko ule tube.
Zhejiang Aijiren Technology, Inc. e kpọbata karịa 70 mba, na-ekpuchi ihe karịrị 2000 ahịa n'ụwa nile. 120 ọrụ, 100,000 klas ihicha ụlọ, ISO, GMP & Bureau Veritas certificated, nke a bụ otú anyị na-elu àgwà na asọmpi ahịa maka uwa kpọrọ ahịa.
The enterprise omenala "Quality mbụ, na-enye a zuru okè." akwalite The Aijiren ịkwaga nọgidere, na ọ na-akwado The Aijiren na-arụkọ ọrụ na innovation.It bụ anyị azụmahịa eme nke na-ekwe nkwa inye elu àgwà ngwaahịa na ezi ọrụ anyị ahịa. "Nọgidere na-emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa igbo mkpa nke ndị ọrụ" bụ anyị ihe mgbaru ọsọ kasịnụ. Anyị ụlọ ọrụ dị njikere inyocha nke ukwu ahịa nke China na ná mba ọzọ, na-achọ nkịtị mmepe na ọhụrụ ubi nke na-arụ ọrụ. 70 percent nke ngwaahịa na-ere ka Europe na United States gasket ahịa. Site n'aka ihe karịrị afọ iri nke mmepe na mgbalị, inyerịta na-akwado na ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ngalaba n'ụlọ na mba ọzọ, anyị na-ọma mepụtara iche iche na ụdị autosampler vials akpan eji na laabu na analysis ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike inye ịkwa akwa mere laabu consumables ngwaahịa na elu àgwà na ahịa n'ụwa nile, nke nwere ike inyere gị imeri nsogbu n'ọdịnihu mgbe na-eme nnwale na laabu.
"N'ubi, akpọnwụwo, ọhụrụ"
bụ okwukwe na ozi nke Aijiren, na ọ bụ ntọala nke anyị development.
Mmadụ Bịa na-eleta ma na-arụkọ ọrụ!